Phinda Lost Noma Isuse Idatha Kusukela An SSD | Data Recovery for SSD
Indlela Phinda Lost Noma Isuse Idatha Kusukela An SSD
Home → Indlela Phinda Lost Noma Isuse Idatha Kusukela An SSD
Kutholwa idatha elahlekile noma ususiwe kusukela SSD (Solid State Drive) akudingeki angadida.
Ukuze siqiniseke, nge RescuePRO® Deluxe for SSD, inqubo yokutakula akulula njengoba ezintathu ezilula.
*Ngicela uqaphele, RescuePRO® Deluxe for SSD yakhelwe uyalulama idatha kusuka zangaphandle oshayelayo SSD, it is hhayi yakhelwe ukuthola ukusuka uhlelo ngemoto.
RescuePRO® Deluxe for SSD itholakala kokubili Windows® kanye Mac version.
Thola inguqulo-Windows lapha……
Thola Mac version lapha….
Indlela ukuze alulame amafayela asusiwe kusukela SSD yakho?
Insure ukuthi zangaphandle SSD drive yakho ixhunywe kukhompyutha yakho.
1. Qala RescuePRO® bese ukhetha uhlobo indlela yokutakula ofuna ukulwenza – Phinda nge-Ifayela sokuqukethwe (Uhlobo) noma Phinda ngu yamafayela wesitoreji (Susa ukususa).
Phinda nge-Ifayela sokuqukethwe izoskena kudivayisi yakho yonke futhi alulame idatha nge ukuqashelwa okuqukethwe uhlobo lwefayela ngisho noma uhlelo lwefayela sishoda.
Phinda ngu yamafayela wesitoreji kuyinto umsebenzi uyeke ukususa izinguqulo futhi kudinga yamafayela wesitoreji evumelekile.
Awunaso isiqiniseko sokuthi yiluphi uhlobo yokutakula kungase kudingeke ukutakula yakho?
Unganqikazi xhumana nathi mahhala technical support.
Abasebenzi bethu friendly ungahamba wena ngokusebenzisa ukukhetha yokutakula efanele isimo sakho.
Uma ukhetha alulame by Okuqukethwe Ifayela, esikrinini esilandelayo kuzokuvumela ukuba ukhethe noma ifotho, Audio / Video, noma ezinye Amafayela.
2. Choose your removable media from the list (ukusebenzisa okukhethwa okuzenzakalelayo okokuqala RescuePRO is run bese usebenzisa uhlamvu drive esimele imidiya yakho noma ngokuqondile kudivayisi kwimodi ngokomzimba uma kungekho incwadi drive okunikezwe imidiya yakho).
Khetha QALA ukuqala inqubo ukuskena.
3. Once the scan completes you will receive a list of recovered files. Amafayela agcinwa ku-idrayivu kanzima ngokuzenzakalelayo.
Chofoza lokukhipha Ifolda ukubuka amafayela:
Yilokho kuphela! manje Amafayela akho kuzobukeka ifolda okukhipha.
Ukuze silondoloze idrayivu nge amafayela asusiwe, wonke amafayela walulama, esimelwe ukusindiswa kwenye idivayisi isitoreji noma enye incwadi drive ohlelweni. Ungalandi isofthiwe ku-idrayivu ofuna alulame.
Sicela ukhumbule, uma udinga alulame amafayela kusuka hard drive, sicela usebenzise FILERECOVERY® ngoba hard drive yokutakula.
Uma behluleka sokusukuma futhi ubone idatha nge izinguqulo Isivivinyo, lapho kungaba nezinye izimo sikwazi ukukusiza. Sine ochwepheshe wazibonela ongenza ukululama ngokomzimba kwelinye izikhungo zethu yokutakula idatha. Ukuze uthintane wethu izikhungo yokutakula idatha, vele uchofoze lapha >>> Data Recovery Centres<<<< Nge imikhiqizo yethu yokutakula, sinikeza angenamkhawulo khulula bokusebenza. Uma unemibuzo lwezobuchwepheshe izinguqulo ezahlukene etholakalayo noma iyiphi inguqulo engcono kuwe, sicela uxhumane nathi